Faafida aqoonta is-difaaca
Maskaxda difaaca ee KN95
Maska ilaalinta N95
Aqoonta ilaalinta cudurka faafa ee dadka qaar horeyba usocdaan ama dhawaan shaqada aadayaan, cudurka dillaaca hada waa inuu sameeyaa? 1. Sida saxda ah ee loo xidho maaskaro qalliinka tuurista lagu tuurayo inta shaqada lagu gudajiro Isku day inaad ka fogaato taabashada waxyaabaha baska saaran.
2, sida loo galo dhismaha ka hor intaadan soo galin xafiiska dhismaha si taxaddar leh u aqbal tijaabada heerkulka, heerkulku waa iska caadi inuu soo galo dhismaha, oo gacmahaaga ku maydho musqusha.Haddii heerkulka jirka uu ka sarreeyo 37.2 ℃, fadlan ha gelin dhismaha shaqada. , oo guriga aad aadid si aad u fiiriso oo aad u nasato. Haddii loo baahdo, tag cisbitaalka si loo daweeyo.
3. Meesha xafiiska ka dhig mid nadiif ah hawo qabowna hawo 20-30 daqiiqo saddex jeer maalintii. Fadlan kululeyso marka aad hawo gasho. Meel u jirta in ka badan 1 mitir dadka u dhexayso, oo xiro dabool marka dad badani shaqeeyaan.Isku dhaq gacmaha iyo biyo la cabbo marwalba dhinacyada dhinacyada soo dhaweynta xiro waji xidh.
4. Waxaa lagu talinayaa in la xiro maaskaro oo gacmaha la dhaqo ka hor intaadan soo gelin qolka kulanka. Shaqaalaha kulanka kulanka waa in ka badan 1 mitir. Hoos u fiirso shirarka, xakamee waqtiga kulanka, waqtiga kulanka ayaa aad u dheer, fur fur furka 1 .Moolka iyo alaabta guriga waa in la nadiifiyaa kulanka kulanka ka dib. Sahayda la dejiyey waxaa lagula talinayaa in lagu nadiifiyo biyo karkaraya.
5. Hoolka qolka cuntada wuxuu qaataa cunno kala gooni ah si looga fogaado shaqaalaha cufan. Makhaayadda ayaa la jeermisaayaa hal jeer maalintii, miisaska cuntada iyo kuraasidaana waa la jeermiyaa ka dib isticmaalka. Qalabkaas waa in lagu dhajiyaa.Qolka qalliinka nadiifi oo engeg. Ha ku darin cuntada ceeriin cuntada karsan. Ka fogow hilibka cayriinka ah. Xiro maaskaro qalliin la iska tuuri karo markii aad shaqada ka tageeyso. Dhaq gacmahaaga oo jeermiga iska nadiifi ka dib ka qaadista maaskaro guriga. Kuxir taleefanka iyo furayaasha furaha tirtirista ama 75% aalkolool ah. Qolka qolka hawo qabooji oo nadiifi, ka fogow dad badan inay isu yimaadaan.
7. Bax oo xiro maaskaro si aad uga fogaato dadka faraha badan. Ka fogee masaafo ka badan 1 mitir dadka kana fogow joogista meelaha dadweynaha waqti dheer.
8. Soo jeedi waxqabadyo habboon oo dhexdhexaad ah inta lagu jiro shaqada iyo nasashada si loo hubiyo caafimaad wanaagsan.
9. Meelaha dadweynaha waa in loo dilaa maalin kasta forta, korantada, qolka kulanka, wiishashka, jaranjarada, musqusha iyo qaybaha kale ee dadweynaha, iyo in jeermiga lagu buufiyo loo isticmaalo sida ugu macquulsan. qaso.
10. Waxaa lagu talinayaa in lagu nadiifiyo gudaha iyo albaabka gaari qaas ah safarada rasmiga ah ee leh 75% aalkolada hal mar maalintii. Qaado baska xamuulka ah si aad u xirto maaskaro, waxaa lagu talinayaa in baska xamuulka ah ee la isticmaalo 75% aalkolada Gaariga gudihiisa iyo gacanta albaabka tirtir jeermiska jeermiska.
11, shaqaalaha saadka korantada soo iibsiga ama alaab-qeybiyeyaasha waa iney xirtaan maaskaro ama galoofyada caagga ah ee la tuuro, iska ilaali taabashada tooska ah ee hilibka iyo digaagga digaaga, jeermiska gacmaha lagu dhaqo waqtiyada gacmo gashiga kadib. shaqaalaha waa inay xirtaan maaskaro si ay u shaqeeyaan, oo ay si dhab ah u weydiistaan ​​oo ay u diiwaangeliyaan heerka shaqaalaha ajnabiga ah, oo laga helay xaalad aan caadi ahayn oo ku soo wargelisay waqtigii loo qabtay.
12, booqasho rasmi ah sida loo sameeyo waa inay xidhato maaskaro. Kahor intaadan galin xafiiska, qaadin tijaabada heerkulka iyo soo bandhig taariikhda taariikhda hubei soocashada iyo astaamaha sida qandhada, qufaca iyo dyspnea.Dadka maqnaanshaha xaaladaha kor ku xusan, iyo jirka heerkulka 37.2 ° xaaladaha caadiga ah, wuxuu geli karaa ganacsiga dhismaha.
Dhaq gacmaha ka hor iyo ka dib gudbinta dukumiintiyada waraaqaha, oo xiro maaskaro markii aad gudbineysid dukumiintiyada.14, taleefan jeermis-dilis sida loo sameeyo taleefanka khadka taleefanka ee lagula taliyo 75% khamri nadiifi laba jeer maalintii, haddii si joogto ah loo isticmaalo si habboon ayaa loo kordhin karaa.
Waqtiga boostada: May-26-2020
Cinwaanka: No.302 Wadada Guiyue, Guanlan
Telefoonka gacanta: 13751122484
Telefoonka gacanta: 18718931851
Telefoonka gacanta: 18123747257